Duubbee kewwattoota, fuulawwan, irraantoo miljala, goodayyawwan barruu gabate, kutaalee man'eewwani fi fuulawwan ifteessuu ni dandeessa.
Cancala Dhangii - Keewwata - Duubbeefili
Cancala Dhangii - Arfii - Duubbeefili
Cancala Dhangii - Fuula - Duubbee fili
Qabaduu Dhangii - Fuula - Irraantoo - Dabala fili
Qabaduu Dhangii - Fuula - Jalaantoo - Dabala fili
Cancala Saagi/Gulaali - Kutaa -Duubbee fili
Saxaatoowwan yookiin halluuwwan duubbee fuulawwan keessaa qindeessuu(saxaatoo golgolaa'aa)
Akaakuu duubee kan fayyadamu barbaadde fili.
Halluu akka Duubbeetti fayyadamu
Halluu shoolamiinsa ammee gara filannoo barruu duubbee fayyadami. Yoo barruu tokkolleen hinfilamin, sajoo Shoolamiinsa cuqaasi, barruu shooluu barbaadde fili, akkasumas sajoo Shoolamiinsaa deebi'ii cuqaasi. Halluu shooluu jijjiiruf, xiyya sajoo Shoolamiinsaa ittaanu cuqaasi, akkasumas halluu barbaadde cuqaasi.
Dirqaalli kun yeroo duubee gabatee ykn haalata keewata gulaaltuqofa jireessa.
Saxaatoo akka Duubbeetti Fayyadamu.
Odeefannoo waa'ee faayilii saxaatoo qabata.
Xurree faayilii saxaatoo mul'isa.
Faayilii saxaatoo faayilii ammee keessaa kornyeessa ykn ida'a.
Duraargii saxaatoo filatamee agarsiisa ykn dhoksa.
Faayilii saxaatoo kan akka duubbeetti fayyadamuu barbaadde hundessi, ittaansuudhaan Banicuqaasi.
Haala saaxatoo duubee itti agarsiisuu barbaadde ifteessi.
Dirqaala kana fili, ittaansuudhaan argama tarsaa qabubannoo keessaa cuqaasi.
Duubbee wanta filatamee hunda guutuf diriirsa.
Duubbee wanta filatamee hunda akka uwwisuu saxaatoo irra deebi'a.
Title is: Duubbee